China Multiwire ịbịaru Machine Manufacturer na Supplier | Elu Elu
Igwe ihe osise Multiwire
Oge Mbuga ozi Daysbọchị 180
Port nke Loading Guangzhou, China
Usoro HS 8463102000
Akpa ibu 2 * 40HQ
Oge Akwụkwọ ikike Ọnwa iri na abụọ
ase ugbu a budata na pdf
N'ikwu okwu n'ozuzu, mmepụta nke ndị nduzi bụ nzọụkwụ mbụ mgbe ị na-arụ wires na eriri. Ogo ndị na-eduzi ihe metụtara ọrụ nke ngwaahịa USB niile. Na arụmọrụ arụmọrụ na-emetụtakwa maka ọnụahịa mmepụta nke ngwaahịa USB. A na-arụ nhazi nhazi nke ọdịnala site na otu waya waya-wheel-wheel na-ese igwe. A na-adọta eriri ọla kọpa / aluminom na igwe na-ese ihe iji nweta dayameta achọrọ.
Mana na usoro nhazi ọhụụ, a na-eji igwe ihe osise ọtụtụ multiwire.
The igwe provided by LINT TOP is an innovation based on traditional one. It can draw multiple copper wires of the same diameter simultaneously, and can achieve online annealing after drawing to obtain multiple copper wires with the same electrical properties.
Compared with the traditional single head drawing machine, the igwe has some certain superiorities:
1). Kwalite ogo ngwaahịa a, ọkachasị mgbe ị na - eme ihe ọzọ. Ọ na-ekwe nkwa nkwado nke steeti nke ọ bụla otu wires yana mma conductivity na nro nke eriri wiwi.
2). Productionkwalite mmepụta arụmọrụ. Mepụta ọtụtụ wires n'otu oge yiri nke ọtụtụ igwe ịbịaru otu isi na-arụkọ ọrụ ọnụ, nke dị ọtụtụ oge karịa nke ọdịnala.
3). Chekwa ego. Otu igwe na-ese ọtụtụ ihe nwere ike dochie ọtụtụ igwe ihe osise, nke nwere ike ịchekwa ego ntinye nke akụrụngwa, yana n'oge nrụpụta, ọ nwekwara ike belata ụgwọ ọrụ.
2. Akụrụngwa Akụrụngwa
Igwe ihe osise na-ebute nnyefe dị oke nkenke dị na mbara igwe ma kwadebere ya na ụdị ịgba mmanụ na mmanụ dị nro. Lubrication na-enye site na nnwere onwe moto-chụpụrụ gia mgbapụta, na nchedo nchedo ma nwee ike nweta mmanu mmanu shutdown.The igbe jụrụ nke ịbịaru igwe adopts ike ịgba ụdị mmanu jụrụ, nke nwere ike n'ụzọ zuru ezu ajụkwa na iho mmanu eserese wheel, nwụrụ na wires. , iji hụ na mma ịbịaru mma.
3. Main Nka na ụzụ oke
Anyị na-enye igwe dị iche iche na-ese ihe dị iche iche, isi ihe eji arụ ọrụ dị ka ndị a:
Ọnụọgụ nke wires
Isi mmiri dayameta (mm)
Tinyekwa n'obosara (mm)
Eserese ọsọ (m / min)
Eserese wheel dayameta (mm)
Capstan dayameta (mm)
Ọnụọgụ nke ọnwụ
Igwe elongation (%)
Mgbakwunye ugbu a (A)
Bobbin nha (mm)
4. waya ịbịaru Mmetụta
Anyị na-enye ụdị dị iche iche nke igwe ihe osise iji mepụta ihe osise nke nkọwa dị iche iche. Ejiri ọsọ ọsọ ọsọ, arụmọrụ dị elu, obere akụrụngwa na ogo dị elu nke ịbịaru ngwaahịa.
Osote: Ọla kọpa / Aluminom RBD Machine
Akụrụngwa ndị a gụnyere igwe na-akwụ ụgwọ, igwe na-ese ihe, ngwaọrụ annealing, onye na-ahụ maka esemokwu, nnabata na onye na-agagharị agagharị, yana sistemụ njikwa elektrọnik.
1. -kwụ ụgwọ
Kwụ ụgwọ nke igwe ihe osise multiwire bụ ụdị ogbe nke nwere ike ịkwụ ụgwọ ọnụ ọgụgụ dịka ọnụọgụ wires. Speedkwụ ụgwọ ịkwụ ụgwọ nwere ike iru ihe ruru 250m / min, nke nwere ike izute ihe achọrọ ịkwụ ụgwọ nke igwe ihe osise multiwire na oke ọsọ.
2. Waya ịbịaru igwe
Igwe ihe osise na-achịkwa wires 8 dị ka ihe eji arụ ọrụ, wires 16 dị ka nhazi nke okpukpu abụọ, ma ọ bụ na-achịkwa wires 7 dị ka ihe bụ isi, 14 wires dịka nhazi nke okpukpu abụọ. Edere ihe osise a na nhazi nke uzo. Ntanetị ahụ na-ebute nnyefe nnyefe na draịva eletrik abụọ (isi moto na nke na-agba ọsọ ọsọ ọsọ na-ebugharị iche). Nke a nwere ike ịmata mgbanwe ngwa ngwa nke ịnwụ ma belata oge inyeaka n'oge mgbanwe.
Ndabere nke igwe eserese bụ usoro a na-agbanye ọkụ, nke a na-edozi ma mepụta mgbe mgbakwunye na iwepụ nrụgide dị n'ime ya na nkwụsi ike na ike dị elu. E kewara igbe igbe ahụ gaa na ngalaba abụọ, ma hazie ya ma mepụta ya mgbe annealing na iwepụ nrụgide dị n'ime. Ọ na-eji nkenke nkenke nkedo nnyefe dị elu ma nwee ike ịgbanye mmanụ dị nro na nju mmanụ. Na mgbali nchedo, ọ nwere ike na-aghọta mmanu mmanu ọdịda shutdown, na-onwem na mmanu mmanu jụrụ na nzacha ngwaọrụ. The jụrụ igbe adopts ike ịgba ụdị mmanu jụrụ, nke nwere ike n'ụzọ zuru ezu ajụkwa na iho mmanu ịbịaru wiil, anwụ na wires, iji hụ na mma ịbịaru mma. A na-agbapụta ịgba ahụ site na nrụgide moto, na-ekpuchi ya na anya ebu isi ya. A na-eji isi oghere aka emezi oghere oghere iji hazie etiti nke ọnwụ, nke nwere ike ịmịchaa etiti anwụ ma belata ọnwụ. Ihe mkpuchi igbe ahụ na-agbaso usoro ntụgharị, nke dị mfe ịrụ ọrụ.
3. Igwe nkpuchi
Igwe anyị na-ekpo ọkụ na-ewebata kọntaktị mkpirikpi kọntaktị ma nwee usoro nhazi ọhụụ. Nwere ike ịhọrọ annealing nke okpukpu abụọ ma ọ bụ okpukpu atọ dị ka ihe chọrọ nke dayameta waya. Ahụ na-agbaso usoro mgbatị na-arụ ọrụ na tankị mgbake maka okpuru mmiri na ala. The conductive wheel set eji jikọtara Ọdịdị na ọla kọpa wheel ahụ na nickel spraying conductive ala. The carbon ahịhịa na conductive wheel na-lekwasị mma site na iji ike ofufe. Onye ọ bụla conductive wheel a na-agba ọsọ site a ewepụghị belt, na ike na-nyere site ofu-ọsọ wheel moto. Ike annealing bụ ihe dị ugbu a, nke kwesịrị ekwesị maka itinye ọtụtụ wires ọla kọpa.
Igwe annealing nwere usoro ihe eji eduzi ya, sistemụ nchekwa ọxịdashọn, sistemụ jụrụ oyi, sistemụ na usoro eletriki. Nchedo oxydation na-eji nchebe uzuoku; na obi jụrụ na lubrication eji itughari ịta ịbịaru mmiri mmiri mgbasa; usoro ihicha eji abịakọrọ ikuku na-anwụ ihicha. Ọ nwere ike hụ na ọdịdị nke waya ọla kọpa na-enwu gbaa ma ọ nweghị ọxịdashọn, ma nwee ike izute arụmọrụ arụmọrụ nke elongation na resistivity nke ọla kọpa mgbe mgbakwunye.
1. Siemens moto;
2. Japanese Yaskawa ika inverter;
3. Siemens programmable njikwa (PLC) na ihuenyo mmetụ;
4. Schneider ngwa-ala eletrik;
5. NSK biarin.
Na mgbakwunye na ngwaọrụ akwụ ụgwọ a kpọtụrụ aha n'elu, igwe eserese, ngwaọrụ annealing, onye na-ahụ maka esemokwu, nnabata na onye na-agagharị agagharị, yana sistemụ njikwa elektrọnik, ụfọdụ ngwa inyeaka dịka ịbịaru anwụ, ihe nzacha emulsion ọla kọpa, igwe na-atụzi igwe na ndị na-ekpo ọkụ oyi. dịkwa mkpa n'oge usoro ịbịaru.
Equipmentbịaru inyeaka ngwa anyị nyere nwere ike izute ịbịaru mmepụta nke ụdị dị iche iche nke igwe ihe osise ọtụtụ. Ọ nwere ike ọ bụghị naanị ịme ka usoro ịmị mma dị mma, melite ogo elu nke ngwaahịa a, kamakwa belata ọnwụ nke ịbịaru akụrụngwa ma bulie ndụ ọrụ ya nke bụ ngwaọrụ dị mkpa n'oge usoro ịbịaru.
Banyere igwe na-ese ọtụtụ ihe, anyị nwere ọtụtụ eserese iji nyere ndị ahịa aka, gụnyere ịhazi eserese, ịbịaru ntọala, ịbịaru maka ọdọ mmiri mmiri mmiri, eserese eserese nke pipeline, na eserese ọdọ mmiri emulsion. Ndị ahịa nwere ike iru osisi dị ka nhazi ahụ, ma hazie omimi nke ntọala ahụ ma dozie ikpo mgbochi ma ọ bụrụ na ala esighi ike ịkwado akụrụngwa dịka ịbịaru ntọala. Ahịa nwere ike iru ihe annealing mmiri mmiri ọdọ mmiri dị ka akwụkwọ ịbịaru anyị nyere, ma mkpa tụlee n'ezie ọnọdụ nke osisi. Nke a dịkwa mma maka ọdọ mmiri emulsion.
Anyị ga-eziga ndị injinia iji duzie nwụnye na inye ọrụ mgbe ngwa rutere. Injinia ahụ ga - enyere aka ịwụnye akụrụngwa ahụ, wee gbalịa ịse ihe dị iche iche nwụrụ. N'oge usoro ihe osise ahụ, injinia ahụ ga-azụ ndị ọrụ ndị ahịa ahụ, kụziere ha ka ha zụọ eriri ndị ahụ site na eserese ahụ nwụrụ, na ịnagide nsogbu ndị ezutere na usoro ịse ihe. Usoro dum nwere ike were ụbọchị 10.
Q: Enwere m ike ịga ụlọ ọrụ mmepụta ihe gị?
A: A na-anabata ndị ahịa niile si n'ụlọ na mba ofesi ileta ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ anyị.
Q: you na-enye nwụnye na inye ọrụ?
Azịza: Ee, anyị na-eme dị ka ndị a: -
Ozugbo ndị ahịa gwara anyị na etinyela igwe na ebe kwesịrị ekwesị, anyị ga-eziga ma injinịa na igwe eletrik maka igwe ịmalite.
-No-ibu ule: Mgbe igwe arụnyere kpamkpam, anyị na-eme adịghị-ibu ule mbụ.
-With-ibu ule: Abụkarị anyị ga-emepụta 3 dị iche iche wires iji mee nnwale ibu.
- Nkwupụta nnabata: Mgbe onye zụrụ ahịa gosipụtara na igwe nwere ike iru nkọwa niile n'okpuru nkwekọrịta, a ga-edebanye akụkọ nnabata maka ndekọ anyị na igwe ahụ ga-anọ na oge nkwa.
Ajụjụ: Kedu ozi m kwesịrị inye iji nweta nkọwa zuru ezu n'aka gị?
A: Maka otu igwe: A na-achọkarị ịmara nha waya ntanye, nha nke waya ka a rụpụta, imepụta ihe, kwụọ ụgwọ ma weghara oke iji họrọ igwe dị mma.
Maka igwe osisi ọhụrụ ma ọ bụ eriri eriri igwe ọhụụ, ọ dị anyị mkpa ịmata datasheet nke eriri ndị a ga-arụpụta, arụpụta ihe, ụkpụrụ ndị a ga-agbaso, wdg iji mepụta igwe niile achọrọ.
Ajụjụ: you nwere ike ịnye akụrụngwa inyeaka yana igwe?
A: Ee, n'ezie.
Anyị nyere okpomọkụ Exchanger, ọla kọpa / aluminum ntụ ntụ nyo igwe, jụrụ ụlọ elu, chiller, ikuku Compressor, ịbịaru nwụrụ, na-atụ igwe, oyi welders, bobbins wdg na anyị na ígwè ọrụ.
Ajụjụ: you nwere ike ịme atụmatụ maka osisi niile?
A: Ee, nke a bụ uru anyị.
Site na eriri data nke USB iji mepụta, ọkọlọtọ eriri gị kwesịrị ịgbaso, nrụpụta ị tụrụ anya ya. Onye injinia anyị na teknụzụ mmepụta na akụrụngwa ga-emepụta igwe eji emepụta igwe, akụrụngwa nnwale, ngwa dịka bobbins, ịnwụ, ahịrị azụ na akụrụngwa dị mkpa.
Q: Kedu ka m ga-esi mara ọkwa usoro m?
Azịza: Anyị nwere anyị OA usoro na nsuso mmepụta.
Maka arịrịọ ọ bụla ị nwere ike izipu foto na vidiyo nke usoro gị, anyị nwekwara ike iji oge iji mee ka ị mata mmepụta.
Q: Kedu ka ị si arụ ọrụ na nyocha tupu ịnyefee gị?
A: Anyị ga-eme ike itule ule, larịị ule, mkpọtụ ule, wdg n'oge mmepụta.
Mgbe emechara ya, anyị na-eme ka ibu ọrụ na-arụ ọrụ nke igwe ọ bụla tupu nnyefe ya. A nabatara ndị ahịa ịga nyocha.
Q: Kedu ihe ngosi ị ga-aga, anyị nwere ike izute na ngosi ahụ?
A: Dusseldorf International Waya na USB Fair;
Ihe ngosi nke South America Fair;
International Waya na USB Fair na Shanghai;
International Istanbul Wire Fair, wdg. Waya
Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia, wdg.
Ọla kọpa / Aluminom RBD Machine
Ọla kọpa Intermediate Waya ịbịaru Machine
Copyright © 2021 LINT TOP CABLE TECHNOLOGY CO., LTD. Apụta Products ,Sitemap